Farriin si la yaab leh loo diray oo sababtay iney badbaadaan dad biya ku go’doomay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Farriin si la yaab leh loo diray oo sababtay iney badbaadaan dad...
Farriin si la yaab leh loo diray oo sababtay iney badbaadaan dad biya ku go’doomay
Qoys seddex xubnood ka kooban oo ku go’doomay meel biya ah ayaa la soo badbaadiyey, kaddib marki la helay farriin ay ku dhex rideen caagad biyaha lagu cabbo oo ay siteen ayna raaciyeen biyaha wabiga ee socda.
Curtis Whiston, Saaxibaddii iyo wiil 13 jir ah oo uu dhalay ayaa waxay bishi June dalxiis ku marayeen bartamaha California.
Qorshahooda dalxiiskana wuxuu ahaa iney raacaan wabiga halka uu ka imanayo ilaa ay marki dambe la kulmaan biya aad u xooggan oo meel sare ka soo dhacayo.
Waxayna dib u sii raaceen biyaha iyo halka ay ka soo dhacayaan ilaa uu socodkooda uu hakaday marki ay biyuhu go’doomiyeen ayna gaaren meel ay ka soo bixi waayeen.
Seddex maalmood ayaa waxay ku go’doon sanaayeen halka ay biyuhu ka soo dhacaan oo aad ciriiri u ah isla-markaana dhererkiisu uu gaarayo 15 mitir
Mr Whitson wuxuu rajeeynayay inuu xarigga ay sitaan uu ka caawin karo inuu hoos uga soo dagaan ama ay raacaan dhinaca ay biyuhu u socdaan balse wuxuu garwaaqsaday haddii ay sidaa sameeyaan iney xaaladda ka sii dari karto maadaamaa ay biyuhu si xoog ah gabiga uga soo dhacayaan xawaarana ay ku socdaan.
“Wadnaha ayaa i istaagi gaaray marki aan arkay cadadka biyaha iyo xooggooda oo aan dareemay iney halistooda badan tahay oo ay na dafi karaan” ayuu yiri Mr Whiston oo CNN u warramay.
Taleefannadi gacanta ee aan sidannay “Khadka waa ay soo qaban wayeen”, kaddib Mr Whitson waxaa u soo baxay qorshe. Wuxuu qoray farriin farriintaasoo ahayd “Waxaan ku go’doonsannahay meel gabi ah oo ay biyuhu ka soo dhacayaan, fadlan inoo soo gurmada”, farriintiisu sidaa ayey u akhrismeysay.
Mr Whiston warqaddi uu farriinta uu ku dalbanayo gurmadka degdegga ah wuxuu ku riday cagaad cagaaran oo nooca biyaha lagu cabbo oo ay siteen afka ayuuna caagadda ka xiray, wuxuuna dusaha sare ee caagadda uu ku qoray “I caawi” caagaddina biyaha ayuu raaciyey.
Farriinti caagadda ay sidday ayaa waxaa laga helay meel u jirta qayaasti 400 oo miitir halka ay iyagu joogaan waxaana helay laba qof oo iyaguna wabiga booqasha ku mareysay oo gudbiyey farriintooda, ayuu yiri Mr Whiston
Kaddib shaqaalaha gurmadka degdegga ah ayaa soo helay Mr Whitson, wiilkiisa Curtis iyo Ms Ramirez saqdi dhexe ee 15-kii June, oo ahayd saacado kaddib marki farriintooda la helay lana gudbiyey.
“Runti ma aysan haysan fursad sidaa u dhaantay oo ay farriintooda ku gudbiyaan,” ayuu yiri Todd Brethor oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka waddooyinka waaweyn ee California.
Mr Whiston wuxuu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo shaqsiyaadkii helay farriintiisa ee sababta u noqday iney soo badbaadaan.
“Waxaana aad ii damaqaday sida ay arrimaha oo dhan sida wanaagsan u wada kulmeen” ayuu yiri mar uu u warramayey Washington Post.
Previous articleGuddoomiyaha Guurtida Oo Madaxweyne Biixi U Gudbiyay Labada Xubnood Ee Uu U Xulay Guddiga Cusub Ee Doorashooyinka
Next articleWaajib Maaha In La Qaato Nambarka Cusub Ee Ay Bixiso Wasaarada Gaadiidka ”Wasiirka Maaliyada Dr Sacad Cali Shire”Daawo Muuqal